Inona no fomba tsara indrindra ahafahana manao backlinks miasa?
Rehefa mitondra fiara bebe kokoa amin'ny tranokalanao ianao dia tonga ny Search Engine Optimization (SEO). Na ianao mihazakazaka bilaogy manokana, fivarotana ecommerce kely, na tranonkala an-tserasera anao manokana - ny fomba tokana hanoboroboana ny fifamoivoizana amin'ny tetikasan-tranonkalanao dia ny hanatsara ny fahitana azy an-tserasera. Amin'izany fomba izany, ny tanjona faratampon'ny tranokalanao SEO dia haseho eo an-tampon'ny pejy voalohany amin'ny valin'ny fikarohana Google. Inona no mahatonga ny SEO tsara? Raha ny momba ny fanatsarana tanteraka, ny tetikady fanorenana rohy dia anisan'ireo singa manan-danja indrindra hitarihana ny fitarihana sy hijanona amin'ny fifaninanana. Nefa ahoana no fomba ahafahana manao backlinks izay miasa amin'ny fomba tsara indrindra? Andao hojerena.
Andao hiatrika izany - tsy ny rendrarendra rehetra no salama. Midika ve ianao fa tokony hamolavola ny lamosinao ny laharam-pahamehanao, fa tsy ny habetsahany. Raha tsy izany dia mety ho ratsy kokoa noho ny tsara ihany koa ianao - satria mety ho rava ny fandroson'ny SEO amin'izao fotoana izao raha sendra rohy mety tsy azo antoka ianao ao amin'ny pejin'ny tranonkala. Noho izany, tokony ho hendry ianao raha handinika tsara sy hanao fanamarinana indroa alohan'ny hahafahanao hiaina backlinks amin'ny farany.
Amin'izany fomba izany, hanampy anao amin'ny dingan'ny fananganana rohy sy fikarohana dia manoro hevitra aho amin'ny fampiasana fitaovana iray ampiasaina amin'ireto fitaovana an-tserasera ireto: Majestic, Semalt Analyzer, ary Ahrefs. Azonao atao koa ny mampifandray ireo fitaovana maro mba hahazoana antoka fa efa misy ny zavatra rehetra. Ataovy izany, andeha hojerentsika ny tokony hatao, ary inona no tokony hatao amin'ny vidiny rehetra. Eto ambany ny lisitra misy fahasamihafana mazava eo amin'ny fifandraisana tsara indrindra izay miasa ho an'ny fandrosonao, ary ny ratsy indrindra tokony hialanao amin'ny lafy marina, na farafaharatsiny, hanaisotra ny filazana fohy.
Misy antony telo lehibe mahatonga ny backlinks hatsarana - fahamendrehana, lanjany, ary toerana. Ny fahamendrehana tsara dia midika fa ny backlinks izay miasa dia tokony avy amin'ny sehatra tokana manana fahefana sy azo itokisana, toy ny loharanom-baovao malaza manerantany, tranonkala PR, na ny sehatra sosialy. Ny lanjan'ny fifandraisana miverimberina dia milaza fa tokony hijery ny lahatsoratry ny tranonkalanao foana ianao. Midika izany fa mety ho rohy mankany amin'ny blaogin'ny teknolojia manondro ny tranonkala engineering ianao. Amin'ny fampiasana zavatra tsy misy dikany, ohatra, ny lahatsoratry ny bilaogin'ny namany amin'ny fanatanjahantena amin'ny ririnina dia tsy hanao mihitsy. Ny toerana misy ny pejy dia zava-dehibe ihany koa - ny toerana mety dia mahatonga ny backlinks ho sarobidy kokoa amin'ny Google. Ohatra, ireo izay hita ao amin'ny footer, sidebar, na ny bio mpanoratra dia hanana lanjany foana. Mandritra izany fotoana izany, ny rohy mifototra amin'ny kontexte dia matetika mitongilana.
Amin'ny ankapobeny, ny rindran-damina ratsy dia fantatra amin'ny endriny manintona mazava, ny fihetsika manipulative, ary ny mamitaka. Amin'izany, Google dia miahiahy amin'ny "antontan'isa tsy ara-dalàna" rehetra ary matetika manasazy ireo tranonkala amin'ny fisintonana ny toerana misy azy. Mba hiarovana ireo rindran-damina, andramo foana ny fanamarinana indroa miaraka amin'ny fitaovana an-tserasera notononiko taloha. Raha ny tena marina, tsy tokony hisy karama na vola be loatra, na rindran-damosina tsy misy dikany,. f. , miaraka amina lahatsoratra endri-tsoratra mahery vaika miaraka amin'ny teny fanalahidy). Ataovy azo antoka tsara ny manalavitra ireo vahaolana mahery vaika, toy ny fambolena fambolena, ny tranom-pivahinianana vahiny, ny laharam-pahaizana ambany kalitao, ary ny rindrambaiko otomobilina natao hamolavolana taranaka miverimberina amin'ny fomba mandeha samirery Source .